'डा. भट्टराईको विचारलाई व्यवहारमा उतार्न नयाँ पुस्ता तयार हुनुपर्छ'
डेढ दशकदेखि माओवादी धारको सक्रिय राजनीतिमा क्रियाशील देवाखर भट्टराई पछिल्लो समय विप्लव नेतृत्वको नेकपाको राष्ट्रिय बुद्धिजिवी संगठनमा सचिवको भूमिकामा थिए । जेठ ३० गते नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको स्थापना दिवसको दिन उक्त पार्टीमा आवद्ध भएका भट्टराईसँग साझापोस्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-
संविधान निर्माणपछि नेपालको राजनीति कता गइरहेको छ ?
संविधान निर्माणपछि नेपालमा लोकतान्त्रिकीकरणको एउटा अध्याय मुलतः पूरा भयो । यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषतः संविधान निर्माणपछाडि सत्ताको नेतृत्वमा हिजो संविधानसभा र अन्य परिवर्तनका एजेन्डालाई अस्वीकार गर्ने शक्ति हावी भएको छ । यसबाट संविधानको वास्तविक मर्मलाई कार्यान्वयन नगर्ने खतरा बढिरहेको छ ।
नयाँ संविधान बनिसकेपछि, मुलधारका राजनीतिक दलहरुले यसमाथि स्वामित्व लिइसकेपछि, हिजो कसले के स्वीकारे वा स्वीकारेका थिएनन् भन्ने कुराको केही महत्व हुन्छ र ?
बाध्यताले नै सही, जनताको परिवर्तनको एजेन्डालाई स्वीकार्नु सकरात्मक पक्ष हो । तर, बाध्यताले स्वीकारेको कि आत्मैदेखि स्वीकारेको हो भन्ने कुरा व्यवहारबाटै पुष्टि हुँदै गइरहेको छ । जस्तो संघीयता कार्यान्वयनमा मुल नेतृत्वको उदासिनताको कुरा अरुले होइन, सत्तारुढ दलकै मुख्य मन्त्रीहरुलगायतले गरिरहेको विरोधले पनि धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।
समाजवाद उन्मुख संविधान भनिएको छ । संविधानले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक हकको स्थान दिएको छ तर शक्तिशाली सरकारको पहिलो बजेटमै यी विषयहरुलाई हदैसम्म उपेक्षा गरिएको छ । उल्टो शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण र व्यावसायीकरणलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । अनि कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरुले परिवर्तनको एजेन्डा र संविधानको मर्मबोध गरेका छन् भनेर ?
जनताले अद्भूत त्याग गरेर ल्याएको लोकतन्त्र र यसको नेतृत्व गर्ने शक्तिहरु नै तपाईंले भनेजस्तो उल्टो दिशातिर यात्रा किन गरिहेका होलान् ?
मुलतः संविधानसभाको एजेन्डालाई संस्थागत गर्न र जनताका प्रतिनिधिहरुबाट संविधान निर्माण गर्ने मुद्दामा देशमा ठूलो संघर्ष भएको कुरा स्मरण गरौं । हिजो यिनै पार्टीहरु उक्त एजेन्डाको विरुद्धमा उभिएका थिए र सत्र हजारभन्दा बढीको ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । अहिले रातारात तिनै दलहरु आफूलाई परिवर्तनको संवाहकको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यो नक्कली कुरा हो, जुन व्यवहारबाट पनि पुष्टि भइरहेको छ । जसको नेतृत्वमा संविधानसभाको एजेण्डा स्थापित भयो र परिवर्तन सुनिश्चित भयो, त्यसैको नेतृत्वमा सत्ता सञ्चालनको सुनिश्चितता नभएसम्म संविधानले मार्गनिर्देश गरेका एजेन्डाहरु कार्यान्वयनमा जान सक्दैनन् । र, जनताले वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति पनि गर्न असम्भव छ । अबको मुख्य संघर्ष यही प्रश्नको वरिपरि केन्द्रित हुन्छ ।
तपाईं विप्लव नेतृत्वको नेकपामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । पछिल्लो समय नयाँ शक्तिमा समाहित हुनुभयो, के कुराले आकर्षण गर्‍यो ?
तपाईंले असाध्यै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । मैले जहिलेदेखि राजनीति बुझेँ, त्यतिबेलादेखि नै यो देशमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ म माओवादी आन्दोलनमा सक्रियरुपमा सहभागी भएँ । शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशसँगै माओवादी आन्दोलनभित्र विभिन्न जोड र कोणहरुबाट बहसहरु सुरु भए । हामीले गणतन्त्र, धार्मिक स्वतन्त्रता, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वि जस्ता एजेन्डाहरुलाई स्थापित गर्न त सफल भयौं तर, जनताको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जुन मुख्य मर्म थियो, त्यो अझै पूरा गर्न सकिएको छैन । अथवा, हिजो हामीले भनेजस्तो क्रान्तिले अझै पूर्णता पाएको छैन भनेर पछिल्लो समयमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यसलाई उचित निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छ कि भन्ने विश्वास र माओवादी आन्दोलनको लिगेसी यही हो भनेर उक्त पार्टीमा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएँ । तर घटनाक्रमहरुलाई विश्लेषण गर्दैगर्दा मैले विश्वास गरेजस्तो नतिजा उक्त पार्टीले निकाल्न नसक्ने निष्कर्षमा म पछिल्लो चरणमा पुगेँ ।
बरु, जनयुद्धदेखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण घटनाक्रमहरुलाई नजिकबाट नियाल्दै जाँदा डा.बाबुराम भट्टराईको प्रष्ट भिजन, राजनीतिक इमान्दारिता र सादगीपूर्ण जीवनशैलीले पछिल्लो समय मलाई नयाँ शक्तितर्फ आकर्षण गर्‍यो । लोकतान्त्रिकरण अर्थात् संविधानसभामार्फत गणतन्त्रात्मक संविधान लेख्ने अभियानको नेतृत्व डा. भट्टराईको पुस्ताले गर्‍यो । जीवनको उत्तरार्धतिर आउँदा पुराना सम्भावनाहरु छाडेर उहाँ नयाँ क्रान्तिको लागि तयार हुनुभयो । यो उहाँको लागि नयाँ जनयुद्धमा सहभागी हुनेजस्तै जोखिमपूर्ण कदम हो । उहाँमा नै वास्तविक क्रान्तिको भिजन र सही बाटो भएको मैले महसुस गरेँ । डा.भट्टराई एक प्रगतिशील विचारक हुनुहुन्छ । उहाँको विचारलाई पुरानो पुस्ताले कपि गर्न सक्लान् तर जीवन व्यवहारमा उतार्न सक्दैनन् । यसको लागि नयाँ पुस्ता तयार हुनुपर्छ । तत्कालीन नाफा घाटामा हिसाब किताब खोज्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन परिणाममा विश्वास गर्ने चिन्तन प्रवृत्ति ममा भएकोले अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा पनि नयाँ शक्तिमा सुन्दर भविष्य देखेर समाहित हुन पुगेँ ।
नयाँ शक्तिबाट कतिपय नेताहरु पलायन भइरहेको बेला तपाई सुन्दर भविष्य देख्दै आएँ भन्नुहुन्छ, तपाईंका तर्कहरु के के हुन् ?
आसध्यै रोचक प्रश्न गर्नुभयो । राजनीतिमा दुईखाले प्रवृत्ति सक्रिय हुन्छन् । एउटा सत्ता राजनीति अर्को रुपान्तरणकारी राजनीति । सत्ता राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्नेहरु जता जाँदा सत्ताको स्वाद चाख्न पाइन्छ, विभिन्न बहाना बनाएर त्यतैतिर जान लालायित हुन्छन् । केही पात्रहरु राजनीतिलाई सही ढंगले आत्मसाथ गर्न नसक्दा पनि पलायन हुन पुग्दछन् । नयाँ शक्ति पार्टी नितान्त नयाँ बाटोमा अगाडि बढेकोले अझै केही समय यो प्रक्रिया चल्न सक्छ । यो प्रक्रियाबाट गुज्रिएर नै पार्टीले आफ्नो वास्तविक आकार ग्रहण गर्नेछ । हामीले सही राजनीतिक पहलकदमी लिन सक्यौं भने निकट भविष्यमा नै पुरानो पार्टीहरुभित्र रहेका र समाजमा विभिन्न पेशा र वर्गमा छरिएर रहेका प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र देशभक्तहरुको ठूलो केन्द्रीकरण नयाँ शक्तिमा हुने प्रष्ट चित्र मैले देखिरहेको छु ।
ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु मिलेका छन् । कतिपयले अब मुलुक दुई दलीय प्रणालीमा गयो भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ शक्तिलाई त प्रतिकूलता मात्रै छ नि होइन र ?
मुख्य कुरा फेरि पनि विचार र राजनीति हो । अब देशको आवश्यकता फेरिएको छ । जनताको चेतनास्तर पनि धेरै माथि उठिसकेको छ । यो बदलिँदो परिवेशमा जुन पार्टीले जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सक्दछ, अन्ततोगत्वा त्यहीपार्टी शक्तिमा आउँछ । हिजोकै सडेगलेका विचार र संस्कारले जनताको नेतृत्व गर्छु र दुई दलीय सिन्डीकेट लागू गर्छु भन्नु पुराना पार्टीहरुको दिवास्वप्न मात्रै हो ।
तपाईं नयाँ शक्तिमा समाहित हुनुभएको केही समय भइसकेको छ । बाहिरबाट बुझेको नयाँ शक्ति र भित्रबाट देखिने नयाँ शक्तिमा केही फरक पाउनुभयो ?
म नयाँ शक्तिमा समाहित हुनुभन्दा अगाडि राम्रै अध्ययन गरेर मुलतः नयाँ शक्ति हामीजस्तै युवाहरुले बनाउने हो भन्ने प्रष्ट बुझाईका साथ पार्टीमा आवद्ध भएको हुँ । यो पार्टीलाई नयाँ युगको आवश्यकता र समृद्धिकरणको अभिभारा पूरा गर्नसक्ने पार्टी बनाउने हो । यसमा हामी युवाकै भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । यसर्थ, बाहिरबाट कस्तो देखिन्छ वा कस्तो रहेछ भन्ने भन्दा पनि विश्वले नै व्यहोरिरहेको वैचारिक संकट चिर्दै नेपाली मौलिकताको समतामुलक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने पार्टी बनाउने हो । क्रान्तिको अभिभारा र स्वरुपहरु युगअनुसार बदलिन्छन् । क्रान्ति जनताको मुल प्रवृत्ति हो । अहिलेको हाम्रो मुख्य अभिभारा आर्थिक सामाजिक न्यायसहितको समुन्नत समाजवाद र सहभागितामुलक लोकतन्त्रको सुनिश्चितता हो । उक्त ध्येय पूरा गर्ने अहिलेको सच्चा क्रान्तिकारी पार्टी नयाँ शक्ति नै हो । म यही निष्कर्षलाई व्यवहारिक रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा उत्साहका साथ लाग्नेछु ।
वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्ने अरु पार्टी पनि छन् । तपाईं भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिमा नै किन आउनुभयो ?
हेर्नुस्, राजनीति भावना, रहर र असन्तुष्टिले मात्रै हुने कुरा होइन । यसको लागि स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण हुनुपर्छ । ‘कम्फर्ट जोन’मा बसेर मुलुकको मूल समस्याप्रति निरपेक्ष रहेर विविधताले भरिपूर्ण र विभिन्न प्रकारका असमानताले जर्जर हाम्रो देशको राजनीतिक मूल प्रवाहमा आफूलाई समाहित गर्न सक्छु भन्नु कच्चा बुझाई मात्र हो । नयाँ शक्तिले अगाडि सारेको ५ ‘स’को अवधारणाले बहुआयामिक ढ्रंगले अबको राजनीतिक निकासलाई स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्छ । सबै वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेहरु रहरले मात्र अबको युगको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर आफूलाई खडा गर्न सक्छन् भन्ने हुँदैन ।
पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति नागरिकको विकर्षण बढिरहेको बेला नयाँ शक्तितिर आकर्षण बढ्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो देखिँदैन । समस्या त तपाईंहरुभित्र पनि छन् नि ?
पुराना राजनीतिक पार्टीहरुप्रति नागरिकको विकर्षण बढेको कुरा सत्य हो । यो मात्रात्मक लक्षण मात्र हो । निकट भविष्यमा नै पुराना शक्तिभित्र ठूला ठूला चिरा पर्ने र जनताले पनि वैकल्पिक शक्तिको तीव्र खोजी गर्ने वस्तुगत आधार बन्दै जानेछ । नयाँ शक्तिले उक्त परिस्थितिको कुशतलापूर्वक नेतृत्व गर्नको लागि आफूलाई तलैदेखि बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । अब हामी आफ्नो शक्तिलाई चुस्त, बलियो र जिम्मेवार बनाउनतर्फ केन्द्रित हुन्छौं । यसको लागि सिंगै पार्टी हाम्रो नयाँ विधान कार्यान्वयन गर्नेगरी महाधिवेशनमा होमिने तयारी गरिरहेको छ ।
सामान्य समयमा त नागरिकलाई बजेटबाट ठूलो आशा हुन्छ । झन् कोरोना महामारी र लकडाउनले थला पारेको जीवन, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रको...